ယာဉ်တစ်စီး တောင်အတက်တွင်နောက်ပြန်ကျတိမ်းမှောက်ရာမှ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၁၀ ဦးဒဏ်ရာရ | Akonthi
မြိုင်ကြီးငူ-မဲသဝေါကားလမ်း ဝါးဘိုးတောင်ခြေကုန်းအတက်တွင် မောင်းနှင်လာသည့်ယာဉ်တစ်စီး နောက်ပြန်လိမ့်ကျတိမ်းမှောက်ရာ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၀ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ကျုံထော်ကျေးရွာအနီး မြိုင်ကြီးငူ-မဲသဝေါကားလမ်း ဝါးဘိုးတောင်ခြေကုန်းအတက်၌ ဧပြီလ ၁၁ ရက်၊ နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်က စိုးနိုင်၊ (၃၃)နှစ်၊ ဇီဇဝါမြိုင်ရပ်ကွက်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်နေ သူမောင်းနှင်ပြီး မကေသီစိုး၊ (၁၄)နှစ်၊ ကျွန်းလုံးညီလာကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်နေသူပါ ၂၁ ဦး(ကျား ၉၊ မ ၁၂)လိုက်ပါလာသည့် 5F/…. Canter ယာဉ်သည် ကုန်းတက်တွင် နောက်ပြန်လိမ့်ကျခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
နောက်ပြန်လိမ့်ကျခဲ့သဖြင့် မကေသီစိုးတွင် ဦးခေါင်းပိပြားဒဏ်ရာဖြင့် အခင်းဖြစ်နေရာ၌သေဆုံးခဲ့ပြီး စောနိုင်မူး၊ (၁၀)နှစ်၊ လင်းလွန်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ်နေသူပါ ကျား ၂ ဦးတွင် နှာခေါင်းသွေးထွက်၊ ဝဲလက်မောင်း/ ပေါင်ကျိုးဒဏ်ရာများ(စိုးရိမ်ရ)နှင့် စိုးနိုင်ပါ ၈ ဦး(ကျား ၁၊ မ ၇)တို့တွင် ပွန်းပဲ့ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ(မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို မြိုင်ကြီးငူတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းစိုးနိုင်၊ (၃၃)နှစ်ကို ရွှေဂွန်းနယ်မြေရဲစခန်း၌ ယာဉ်(ပ)၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၈/၃၃၇(ပေါ့လျော့မှုကြောင့် လူသေမှု/ ပြင်းထန်/ သာမန်နာကျင်စေမှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
ယာဉျတဈစီး တောငျအတကျတှငျနောကျပွနျကတြိမျးမှောကျရာမှ ၁ ဦးသဆေုံး၊ ၁၀ ဦးဒဏျရာရ
မွိုငျကွီးငူ-မဲသဝေါကားလမျး ဝါးဘိုးတောငျခွကေုနျးအတကျတှငျ မောငျးနှငျလာသညျ့ယာဉျတဈစီး နောကျပွနျလိမျ့ကတြိမျးမှောကျရာ ၁ ဦးသဆေုံးပွီး ၁၀ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ကရငျပွညျနယျ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ ကြုံထျောကြေးရှာအနီး မွိုငျကွီးငူ-မဲသဝေါကားလမျး ဝါးဘိုးတောငျခွကေုနျးအတကျ၌ ဧပွီလ ၁၁ ရကျ၊ နလေ့ယျ ၁ နာရီခနျ့က စိုးနိုငျ၊ (၃၃)နှဈ၊ ဇီဇဝါမွိုငျရပျကှကျ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျနေ သူမောငျးနှငျပွီး မကသေီစိုး၊ (၁၄)နှဈ၊ ကြှနျးလုံးညီလာကြေးရှာ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျနသေူပါ ၂၁ ဦး(ကြား ၉၊ မ ၁၂)လိုကျပါလာသညျ့ 5F/…. Canter ယာဉျသညျ ကုနျးတကျတှငျ နောကျပွနျလိမျ့ကခြဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
နောကျပွနျလိမျ့ကခြဲ့သဖွငျ့ မကသေီစိုးတှငျ ဦးခေါငျးပိပွားဒဏျရာဖွငျ့ အခငျးဖွဈနရော၌သဆေုံးခဲ့ပွီး စောနိုငျမူး၊ (၁၀)နှဈ၊ လငျးလှနျးမွိုငျရပျကှကျ၊ လှိုငျးဘှဲ မွို့နယျနသေူပါ ကြား ၂ ဦးတှငျ နှာခေါငျးသှေးထှကျ၊ ဝဲလကျမောငျး/ ပေါငျကြိုးဒဏျရာမြား(စိုးရိမျရ)နှငျ့ စိုးနိုငျပါ ၈ ဦး(ကြား ၁၊ မ ၇)တို့တှငျ ပှနျးပဲ့ပေါကျပွဲဒဏျရာမြား(မစိုးရိမျရ) ရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သဆေုံးသူနှငျ့ ဒဏျရာရရှိသူမြားကို မွိုငျကွီးငူတိုကျနယျဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ပွီး ယာဉျမောငျးစိုးနိုငျ၊ (၃၃)နှဈကို ရှဂှေနျးနယျမွရေဲစခနျး၌ ယာဉျ(ပ)၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၄-က/၃၃၈/၃၃၇(ပေါ့လြော့မှုကွောငျ့ လူသမှေု/ ပွငျးထနျ/ သာမနျနာကငျြစမှေု)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့စဈဆေးနကွေောငျး သိရသညျ။